Forum serasera malagasy Ny fiara ohatran'ny vehivavy :-p - Dinika forum.serasera.org
Ny fiara ohatran'ny vehivavy :-p
Fitohizan'ny hafatra : Ny fiara ohatran'ny vehivavy :-p
Valiny : 89
hery - 18/01/2006 08:04
Angamba mety mahagaga anao fa tena marina io. Tsy resaha hoe double-pont na resaka hoe molotra mazda. Fa ny fitandrohana fiara dia tokony atao tahaka ny mitandroka vehivavy.
1. Alaina kalam
izany hoe tsy gidragidraina (ny varavarana akapoka moramora, ny accelerateur tsindriana tsilaim, tsy entina amin'ny kitoantoana loatra)
2. Tsy fehezina mafy
Fadio mihitsy ilay mamihina volant mafy be fa kenakenao. Tsy manin na somary safoina mihitsy aza rehefa miditra tournant. Moa va tsy tahaka ireny misafo ranjo ireny ianao manodina azy. Aza atosika mankany aloha ny volant kanefa aza sintomina ihany koa.
3. Araho maso
Tsy tahotra mpangalatra fotsiny fa fanaraha-maso ny rehetra. Jereo sao dia manao perte
4. Omeo ranoka
Jereo sao dia mila rano izay ilainy rehetra (rano, menaka, lasantsy, lokidana frein sns)
5. Solosoloy :-p
Euh... ho an'izay mahita hatokona ve mou
ari.malala - 18/01/2006 08:38
dain ko ty Hery d hisolosolo vehivevy zany enao? :-D:-D:-D
jentilisa - 18/01/2006 08:42
Dia kojakojaina tsara isan-kerinandro farafaharatsiny...indrindra rehefa faran'ny herinandro iny indrindra indrindra! iondrehana mihitsy! asa vita ve ny manadio azy?
f'angaha lamaody any aminareo ry ari.malala ny misolosolo fiara?
scorp - 18/01/2006 09:22
tena mapme be ry reto a ! tsy itako ze lazaina fa tapaka ny tsinaiko lety e !
Angie - 18/01/2006 09:45
tena hita mihintsy i hery hoe tatanta vam milay be sy manana vadybe tena karakaraina tsara. :D
mandrindra - 18/01/2006 10:52
6. dia rehefa hitaingina azy dia miakatra moramora, ilay fiara io an, dia tsy manao taingibe
7. indraindray koa tsy maintsy mba misitrika ao ambany manao ny entretien
8. tsy maintsy velomina isanandro fa sao tsy ampy menaka ny motera ka maina eo dia mipôka
Fiffi - 18/01/2006 11:08
9-hividianana kojakoja vaovao manara-lamaody reny ohatra ny ao @ siège mba hatao cuir
10-hividianana ireny zava-manitra mmmmmm be ireny
11-rehefa mba mandalo eo akaikiny iny rehefa madio tsara dia mba safona kely
12-de mba lazaina foana aloha hoe" tiako lesy ialahy"
13-hafanaina tsara aloha alohan'ny hitaingenana azy indrindra rehefa iny ririnina be iny , way tena rehefa vita io de tena mafana anie izy izany e!:-D:-D
hery - 18/01/2006 11:20
Hehe mitombo ihany ny hevitra.
14. Aza matoky saofera fa trondro ny laoka
pissoa - 18/01/2006 11:45
Inona indray re ity fampitahana lavareny ity e
Vahinala - 18/01/2006 11:57
D refa leo an'ilay fiara ka te hividy vaovao indray d hamidy aloha le izy, d atao ohatr'izany koa ve ny vehivavy ???
Fanja1 - 18/01/2006 12:04
lapino - 18/01/2006 12:34
15. Mitsaky frein rehefa hiditra fiolahana
16. Rehefa menamena dia mijanona aloha
ari.malala - 18/01/2006 12:35
ka zany anie ry Vahinala le teneniko d misy manontany ndray we lamaody v ny misolosolo fiara e
Vahinala - 18/01/2006 12:51
ari.malala > Hita wa aky ko
lapino > Hafa ndray nenao zany an ! :-D:-D:-D
diamondra27 - 18/01/2006 13:42
ny fiara tsy ohatran'ny vehivavy fa karakaina , kajikajiana fotsiny . Ny vhv tsy misy azo atao comparer -na @ zavatra hafa fa vhv ihany, raha tsy misy ny vhv de tsy misy ny fiainana satria tao ankibon'ny vhv no nivoaka ny aina , de tokony tsy atao tsinotsinona izy fa tiavina mihoatra noho ny zavatra rehatra
Ny fiara dia tahaka ny trano faharoa ho an'izay passionés satria eo foana izy, de mikojakoja azy eo
Ny fiara de ce n'est qu'un tas de ferailles, raha accident grave enao de aripotsiny iny, ary koa outil de travail ho an'ny sasany(tsy afaka miasa izy raha tsy manana fiara fa any ambanivohitra be ohatra na tsy misy bus sy train any akaikiky)
hery - 18/01/2006 13:57
diamondra> ny fiara no ohatran'ny vehivavy fa tsy ny vehivavy no ohatran'ny fiara
Vahinala - 18/01/2006 14:18
diamondra27 > =D=D=D=D=D
jentilisa - 18/01/2006 14:29
izany hoe i diamondra27 ve tsy azo ampitahaina amin'ny zavatra hafa fa amin'i Vahinala ohatra?
Fiffi - 18/01/2006 14:35
17- aza hadino ny mividy telephone mba ahazoana anao eny na any @ dezaka aza , ary aza hadino koa asio ireny ecoute main libre ireny mba tsy hanahirana anao ny miresaka sy mitondra ny fiara.
18-aza hadino ny manolo ny akanjony rehefa misy voakika ireny tahakan'ny collant moa izany e!:-D:-D:-
19-rehefa mandeha mariage ireny dia asiana décoration manja be ireny ny vehivavy moa izany maquillage :-D:-D:-D
20-Rehefa tsy manana fiara dia tsy afaka mandeha lavitra na dia tena te-andeha lavitra aza.
21-ny fiara dia tsy maintsy entina eny @ garage manao controle technique ( ny vehivavy mankany @ coiffeur , any @ institue de beauté):-D:-D:-D:-D
jentilisa - 18/01/2006 14:38
valin'ny 20: sao dia misy fiara mampandositra lavitra ny tompony kosa?